5 Barnaamij si loo abuuro GIF-yada si dhakhso leh oo fudud | War gadget
5 Barnaamijyo si deg deg ah oo fudud loogu abuuro GIF-yada
GIF-yada ayaa jiray ilaa waqti hore, waxaan u adeegsanaa markasta oo aan awoodno, hadda in ka badan nidaamyada hawlgalka ee ku dhowaad dhammaan taleefannada casriga ah waxaa ka mid ah xulashooyinka kumbuyuutarradooda. GIF waa eray micnaheedu yahay Qaabka Isdhaafsiga Sawirada ama qaab Isdhaafsashada Isbaanishka. Qaabkan waxaa abuuray shirkad isgaarsiineed oo ka socota Waqooyiga Ameerika, waxay taageertaa ugu badnaan 256 midab waxayna gadaal ka ciyaartaa sawirro taxane ah oo soconaya 5 ilaa 10 ilbidhiqsi. Ma lahan dhawaq cabirkooduna aad ayuu uga yaryahay faylasha JPG ama PNG.
Waa wax caadi ah in la helo GIFs halkii laga heli lahaa MeMes-ka caadiga ah, maaddaama kuwan ay ku jiraan dhaqdhaqaaq waxayna noo sheegaan in ka badan sawir aan taagnayn. Waa wax caadi ah in lagu arko baraha internetka ama Twitter, inkasta oo hadda ay fududahay in lagu arko WhatsApp. Laakiin, Maxaan ugu isticmaali karnaa GIF-yada kuwa kale markaynu abuuri karno kuwayaga? Waxaa jira barnaamijyo qaar oo hawshan noo fududeeya. Qodobkaan waxaan ku tusi doonaa 5-ta barnaamij ee ugufiican si loo abuuro GIF-yada si dhaqso leh oo fudud.
4 Sawirka Sawirka
5 Gip GIF Kan sameeyey
Ku dhowaad barnaamijka tafatirka sawir xirfadle ah oo si ballaaran loogu adeegsado beddelka PhotoShop, kaas oo sidoo kale loo isticmaali karo in lagu abuuro GIF-yada ugu fiican. Shaqooyin badan oo ay ka mid tahay abuurista GIFs, laakiin tan awgood Sawirada aan dooneyno inaan wax ka bedelno waa inay ahaadaan qaab PNG ah. In kasta oo barnaamijkani si dhammaystiran u dhammaystiran yahay, haddana waxa uu jahwareer ku noqon karaa dadka khibrad yar, maaddaama xulashadiisu aad u ballaaran yihiin oo ay aad u badan yihiin.
Haddii aan dooneyno inaan isku dayno oo aan abuurno GIF-keena gaarka ah marka lagu daro tifaftirka sawirradeena sida xirfadlayaasha dhabta ah, waan soo dejisan karnaa oo ku rakibi karnaa bilaash boggeeda website-ka rasmiga ah. Barnaamijka waa la heli karaa labadaba Windows sida loogu talagalay MacOS.
Haddii aan raadineyno barnaamij fudud laakiin wax ku ool ah marka la abuurayo GIF-yadayada firfircoon, tani shaki la'aan waa midka aan raadineyno. Faylasha aan ka abuureyno barnaamijkaan waxay la jaan qaadayaan dhamaan daalacashada shabakadaha hada jira waana la wadaagi karnaa oo daawan karnaa dhib la'aan. Tan awgeed, waxay ku filnaan doontaa in lagu daro sawirada aan dooneyno inaan si sax ah u saxno, si loo abuuro animation si sax ah. Waxaan isku habeyn karnaa dhammaan xuduudaha, laga bilaabo waqtiga soo-gaadhista illaa xawaareheeda.
Tifatiraha wuxuu taageeraa qaababka JPG, PNG, BMP iyo GIF. Waxa ugu fiican ee barnaamijka ku saabsan waa inuu yahay mid aad u fudud oo miisaankiisu yahay 5MB oo aan u baahnayn rakibo hore. Waxaan kala soo bixi karnaa gebi ahaanba bilaash boggaaga rasmiga ah Web.
Codsi loogu talagalay oo kaliya oo loogu talagalay abuurista GIF-yada firfircoon. Codsigan uma baahna khibrad badan oo laxiriira tifaftireyaasha sawirka maadaama ay fududahay in la isticmaalo wuxuuna noo ogolaanayaa inaan ku abuurno GIF-geenna tillaabooyin fudud, kaliya waxaan ku dhejineynaa sawirada qaabkooda saxda ah iyo hagaajinta waqtiga soo-gaadhista si aan u jeclaanno. Waa codsi furan oo furan sidaa darteed gebi ahaanba waa bilaash umana baahna rakibid hore.
Codsiga waxaa loo isticmaali karaa qalin qalinka ama disk adag oo banaanka ah maadaama uusan u baahnayn rakibida nidaamka qalliinka. Waxay taageertaa qaabab badan oo ay ka mid yihiin PNG, JPG, BMP iyo GIF. In kasta oo aysan u baahnayn rakibo, waa inaan Java cusbooneysiinaa kooxdeena. Iskuxirkiisu wuu yara kooban yahay laakiin waa sahlan yahay waqtiyadiisuna wax xoogaa wey sarreeyaan, laakiin natiijada waa sidii la filayey. Haddii aad rabto inaad tijaabiso codsigan waxaad kala soo bixi kartaa ka bogga abuuraha.
Mid ka mid ah suugaanta ugu fiican ee tafatirka sawirka. Codsiga waxaa lagu shubay xulashooyin loogu talagalay tafatirka sawirka, laakiin sidoo kale xulashooyin lagu abuurayo GIF-keena. Waxaan helnaa xulashooyin kooxaysan oo noo ogolaanaya inaan si sahal ah u saxno oo aan u hagaajino sawirradeena. Si loo abuuro GIFs waa inaan si fudud u isticmaalnaa dhowr sawir si aan u abuurno sawirka firfircoon. Barnaamijku waa mid dareen leh oo si fudud loo isticmaali karo, laakiin sida GIFtedMotion, waa gaabis iyo culus yahay marka la shaqeynayo, in kasta oo natiijada ugu dambeysa ay mudan tahay, waxaa jira kuwa ka dhakhso badan.
Barnaamijkani gabi ahaanba waa bilaash sida kuwii hore oo waanu soo dejisan karnaa iyada oo aan diiwaangelin hore laga helin boggiisa rasmiga ah Web.
Gip GIF Kan sameeyey
Ugu dambeyntiina, barnaamij u taagan sahlanaantiisa isticmaalka iyo is-dhexgalka saaxiibtinnimo. Iyada oo aan ku abuuri karno GIFs firfircoon bilaash daqiiqado gudahood. Waxaa laga horumarin karaa sawirro isdaba joog ah oo laga soo qaaday goob ama laga soo qaaday gallery-ka gaarka ah. In kasta oo aan sidoo kale haysanno ikhtiyaar aan ku abuuri karno GIF-yada fiidiyowyada ama ka soo galkeena ama YouTube ama barnaamijyada kale ee fiidiyowga ah. Shaki la'aan codsi siinaya ciyaar badan marka la abuurayo sawiradeena dhaqdhaqaaqa si aad ugu adeegsato meel kasta.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan codsigan ayaa ah inay tahay codsi shabakadeed sidaa darteed uma baahnin wax rakibid hore ah, iska qor kaaga website-ka rasmiga ah oo isticmaal mid ka mid ah shaqooyinkeeda kala duwan ee ay bixiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » 5 Barnaamijyo si deg deg ah oo fudud loogu abuuro GIF-yada
FreeBuds 4i: Huawei wuxuu ku soo laabtay furaha tayada / qiimaha